Facebook မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပါတဲ့ မောင်တော်မြို့နယ်က မွတ်ဆလင်တွေကို ရိုက်နှက်နေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ဆက်လက် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အရေးယူသွားမယ်လို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။
အဲဒီ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ မောင်တောမြို့နယ် ကိုးတန်ကောက်ကျေးရွာမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မကြာခင် သတင်းထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။
"ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပါတဲ့ ရိုက်တဲ့ရဲရယ်၊ ခြေထောက်နဲ့ကန်တဲ့ ရဲရယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အခု သူတို့ကို အရေးယူဖို့လုပ်နေပြီ။ တချို့လည်း ဖမ်းထားပြီးပြီ။ ထိန်းသိမ်းထားပြီးပြီ။ ဒီဟာတွေလုပ်တဲ့ အချိန် မှာ ဥပဒေနဲ့အညီပဲလုပ်ရမယ်။ လူ့အခွင့်အရေး မချိုးဖောက်ရဘူးလို့ အဆင့်ဆင့် ညွှန်ကြားထားပြီး သားဖြစ်တယ်။ အခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမှာ ကျနော်တို့ ဒါကိုတော့ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ဒါကို ရဲဘက်ကလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဒီနေ့ပဲလုပ်နေပြီ။ လုပ်ပြီးတော့ အရေးယူမယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ကလည်း သတင်းထုတ်ပေးမယ်"
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ တရားဥပဒေအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှု လုပ်လို့မရကြောင်း ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်သလို တခြားနေရာမှာ အလားတူအဖြစ်အပျက် တွေရှိသလား ဆိုတာကိုလည်း စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်သွားမယ်လို့ ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီးထားတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို ရိုက်နှက်နေ တာတွေပါရှိပြီး အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ကပဲ ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးရွာသားတွေ ရိုက်နှက်မှု ထိရောက်စွာအရေးယူဟု အစိုးရကြေညာ
A good start for the government to acknowledge and take action promptly. This is just the tip of the iceberg. Bullying isawidespread culture in many states. Too bad that the armed forces have hidden these abusive behaviors under the national security claims before.
Jan 02, 2017 01:42 AM
ဒီ လို အခြေအနေမျိုးမှာ ၊ ရဲတွေအနေနဲ့ လုပ်တာ ကိုင်တာ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် လုပ် ၊နေတာ ထိုင်တာ ပြောတာ ဆိုတာက အစ ချိန်ချိန်ဆဆ လုပ်ရမဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ၊ အထက်အရာရှိ ကွပ်ကဲတဲ့သူတွေက မပြောထားတာလား ပာရက်သားနဲ့ မလိုက်နာတာလား၊စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူကိုပါ အရေးယူရမယ် ၊
ရဲတွေအနေနဲ့ အခု ဆက်ဆံရတဲ့သူတွေက အရင်ဆက်ဆံခဲ့ဘူးတဲ့ ၊ ပြည်တွင်းက လက်နက်မဲ့လယ်သမား တွေမျိုး ၊ အလုပ်သမားတွေမျိုး ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူ တွေမျိုး ၊ နိုင်လိုမင်းထက်သွားဆက်ဆံလို့ မရဘူး ၊ ၊ ခေတ်ကလည်းအရင်လို ၊အကာအကွယ်ပေးမဲ့ ၊အဘတွေခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး ၊ ဖြစ်တာနဲ့ ရဲ ဆိုတာ ထိုးကျွေးခံရမှာအသေအချာပဲ ။ မီဒီယာခေတ်ဆိုတာ စက္ကန့်ပိုင်းအတါင်းတကမ္ဘာလုံးကိုသတင်းပျံ့နှံ့ နိုင်တယ်ဆိုတာ နားလည်ထားဘို့တော့လိုတယ် ။
Jan 01, 2017 02:45 PM